Ngwa ndị nrụpụta & ndị na-ebubata ngwa ahịa - ụlọ ọrụ ngwa ngwa China
Akụkụ agha dị n'èzí n'úkwù
Akpụkpọ anụ úkwù, 600D arọ ọrụ oxford w.Ugboro abụọ mkpuchi PVC, eyi na-eguzogide ọgwụ na mmiri na-eguzogide ọgwụ, eriri siri ike nwere ike gbanwee ogologo eriri ogologo nke ọma, ịkwanye obe siri ike na ịkwa akwa abụọ na ebe njedebe D-mgbanaka.Na ike dị ukwuu maka obere vidiyo n'ihu.Ogologo kachasị 125cm.
Nha:49L * 1.5W inch
Ịchụ nta camouflage ukwu katrij eriri w.30 oghere
Ịchụ nta katrij eriri, wuru site 600D camouflage ebipụta akwa, eyi na-eguzogide ọgwụ na mmiri na-eguzogide ọgwụ.Ihe eji achọ mma bụ akwa PU agba aja aja, na-abụkarị oghere 20-40 kwa eriri katrij, ogologo ya bụ 127cm na obosara bụ 8cm, ogologo oghere mgbọ bụ 5.5cm dị elu, dabara maka ịchụ nta mgbo.
Ihe No.LSA 1002
Nha:50L*3W* sentimita asatọ
Agba:Camouflage ma ọ bụ Green, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ịchụ nta sponge padded eriri katrij na akpa zip
Akara katrij padded, nke 600D dị arọ oxford w.Ugboro abụọ mkpuchi PVC, eyi na-eguzogide ọgwụ na mmiri na-eguzogide, n'ime padded na 0.8cm ọkpụrụkpụ ogbo, 100% polyester breathable mesh lining, 2 zipa akpa n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-etinye n'ime ihe na wepụ, site buckles imeghe ma ọ bụ mechie.
Ihe No.Ọnụahịa kasị elu nke LSA1003
Ihe:600D Oxford camouflage ebipụtara PVC mkpuchi
Agba:Camouflage ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ịchụ nta akpụkpọ anụ Waist Belt
Akpụkpọ anụ katrij n'úkwù, ọ bụ nke dị elu dị mkpa achọrọ, ezigbo anụ ehi maka ịdị mma nke mbụ na nke abụọ, dị nro, aka dị mma na-adịgide adịgide, ogologo 133cm na obosara 8cm, nke nwere oghere 30 mgbo, buckles nwere ike ịhazigharị ogologo úkwù nke ọma.Akụkụ na D-mgbanaka nwere ike kpọgidere ihe.
Ihe No.LSA 1004
Ihe:Akpụkpọ anụ ehi nke mbụ na oyi akwa nke abụọ
Ịchụ nta agbapụ n'úkwù katrij eriri
Akpụkpọ anụ katrij, nke 600D dị arọ oxford w.Ugboro abụọ PVC mkpuchi, mgbochi ịkpụ, eyi na-eguzogide ọgwụ na mmiri na-eguzogide ọgwụ, nke ejiri akpa mgbo 30 mee ya site na akwa akwa akwa - nha mgbo ọ bụla bụ 2.5cm obosara na 5.5cm ịdị elu, buckles nwere ike dozie ogologo eriri ukwu, ịkwanye ịkwa akwa na mfe ndọka. ebe.
Ihe No.LSA 1005
Agba:Green Camouflage, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Ịchu nta Waterproof Camouflage Gaiters
Ịchụ nta mmiri na-adịghị egbochi mmiri gaites, nke 600D heavy duty oxford w.Ugboro abụọ mkpuchi PVC, akwa na-eguzogide ọgwụ na mmiri na-eguzogide ya, na eriri na eriri iji dozie oghere ahụ, site na otu ụzọ zipa imeghe ma ọ bụ mechie ka ọ dị ugbu a na velcro ga-emesi ike.N'etiti, enwere ihe na-agbanwe iji mesie ụkpụrụ elu.
Ihe No.Ọnụahịa kasị elu nke LSA1006
Nha:16.5L * 10.2 anụ ọhịa
Ịchụ nta Waterproof Green Gaiters
Ịchụ nta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gaiters, mere nke 600D arọ ọrụ oxford w.Ihe mkpuchi PVC ugboro abụọ, nke na-agaghị eyi na mmiri na-egbochi mmiri, akpa n'akụkụ nwere ike ibunye ketulu mmiri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ, tinye ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma wepụ ya.0.3KGS arọ kwa ibe.
Ihe No.Ọnụahịa kasị elu nke LSA1007
Camouflage gaites, 600D arọ ọrụ oxford w.Ugboro abụọ mkpuchi PVC, eyi na-eguzogide ọgwụ na mmiri na-eguzogide ya, na-agbanwe iji dozie oghere, site na otu ụzọ resin zipa imeghe ma ọ bụ mechie ka ọ dị ugbu a na velcro ka a ga-ewusi ike.N'ime ala, enwere waya igwe achọrọ ka ọ dị na ala akpụkpọ ụkwụ iji dozie gaiter yi.
Ihe No.LSA 1008
Nha:17L * 8.5 anụ ọhịa